सोधिने प्रश्न - Ningbo Artmetal उत्पादन कं, लिमिटेड
गहिरो आइपुगेको पार्ट्स
गहिरो आइपुगेको पार्ट्स सभा
गहिरो रेखाचित्र के हो?
गहिरो रेखाचित्र एउटा पाना धातु निर्मित एउटा पाना धातु खाली radially एक पंच को यांत्रिक कार्य गरेर निर्मित मर मा कोरिएको जसमा प्रक्रिया छ। जब आकर्षित भाग को गहिराई यसको व्यास नाघ्यो प्रक्रिया मानिन्छ "गहिरो" रेखाचित्र
सामाग्री कस्ता प्रकारका संग ARTMETAL काम?
गहिरो रेखाचित्र लागि, भौतिक विकल्प धेरै व्यापक छन् र वस्तुतः प्रक्रिया सबै व्यावसायिक धातु गहिरो रेखाचित्र लागि पाना वा तार फारम उपलब्ध छन्। हामी प्रयोग मुख्य सामाग्री स्टेनलेस स्टील 200-400 श्रृंखला छ। अन्य सामाग्री CRS, HRS, एल्यूमीनियम, पीतल, तामा पनि उपलब्ध छन्।
के संग ARTMETAL काम सामाग्री thicknesses छन्?
9,525 मिमी (004 "गर्न .375") गर्न 0,1016 मिमी
के tolerances हासिल ARTMETAL गर्न सक्नुहुन्छ?
मृत्यु र माध्यमिक मशीनिंग संयोजन संग हामी .00254 मिमी (.0001 ") सम्म tolerances प्रदान गर्न सक्छन्
ARTMETAL माध्यमिक सञ्चालन क्षमताहरु के हुन्?
ट्याप, ड्रिलिंग, वेल्डिंग (छूत, मिग, स्थान), PEM, संवर्धन, standoff insertions, riveting, विधानसभा, इलेक्ट्रो-चमकाने, यांत्रिक चमकाने (hairline, दर्पण), पाउडर कोटिंग, बालुवा नष्ट, passivation, चढाना
म उद्धरण कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्?
तपाईं रेखाचित्र वा नमूनाहरू वा अनुमानित मात्रा संग मस्यौदाहरू हामीलाई गर्न RFQ पठाउन सक्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई2काम दिन भित्र प्रस्ताव गर्नेछ।
के रेखाचित्र काम ARTMETAL गर्न सक्नुहुन्छ?
JPG, पीडीएफ, DWG, DXF, चरण, IGS, आदि।
को ARTMETAL भुक्तान सर्तहरू के हो?
म कसरी तिर्न सक्छन्?
टी / टी, एल / सी, डी / पी, वेस्टर्न युनियन, आदि हामी हाम्रो एजेन्ट को नाम मा जारी गर्दै भुक्तानी र ढुवानी कागजातहरू प्राप्त गर्न एक निर्यात र आयात एजेन्ट प्रयोग गर्नुहोस्। हामी वर्ष हाम्रो विदेशी ग्राहकहरु संग काम गरिएको छ (हाम्रो कोर गतिविधि निर्माण र निर्माण छ)।
Artmetal कसरी गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ?
Artmetal ISO9001 प्रमाणित, सुसज्जित राज्य-को-को-कला मिसिन छ र प्रत्येक उत्पादन चरण को हेरचाह गर्न कुशल कार्यकर्ता, अनुभवी ईन्जिनियरिङ् टीम छ। हामी गुणस्तर मुद्दा छ भने, हामी ठीक वा माल विस्थापन वा आफ्नो भुक्तानी फिर्ता हुनेछ।